NAB သတင်းများ | ၂၀၂၀ NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူ LIVE - Page 2020 - 973 NAB Show News: တိုက်ရိုက်လွှင့်ခြင်း၊ အသံလွှင့်ခြင်း၊ အသံလွှင့်ခြင်းအင်ဂျင်နီယာ၊ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ရေဒီယိုနည်းပညာနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းသတင်းများ။ NAB ပြရန် 2020 ။
အတူနီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှု Manager သို့သတင်းပို့နှင့်အမျိုးမျိုးသောပြပွဲနှင့်စီမံကိန်းများအတွက်ဒီဇိုင်းနှင့်နည်းပညာန်ထမ်းများနှင့်အတူနေ့စဉ်အပြန်အလှန်ရှိခြင်း, ဒီအလုပ်သင်ဆရာဝန်၏အဓိကတာဝန်နည်းပညာဆိုင်ရာအရင်းအမြစ်များနှင့်သိုလှောင်မှုဒေသများ၏အဖွဲ့အစည်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်အတူထုတ်လုပ်မှု Manager ကိုကူညီကြလိမ့်မည်, အဖြစ်ကောင်းစွာအတွက်ဝန်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်အဖြစ် run အပေါင်းတို့နှင့်တကွဌာနဆိုင်ရာများတွင်အသင်းများကိုဒဏ်ခတ်။ အဆိုပါထုတ်လုပ်မှု Internship တစ်ဦးလက်ပေါ်အနေအထားနှင့်အလုပ်သင်ဆရာဝန်ထုတ်လုပ်မှု၏အားလုံးဒေသများတွင်ပါဝင်ရန်မျှော်လင့်ထားလိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည် - ရှုခင်း, အလင်းရောင်, အသံ, ဗီဒီယို, ဇာတ်စင်စီမံခန့်ခွဲမှု, ဝတ်စုံအဖြစ်ဖွင့်လာစေခြင်းငှါတခြားအလုပ်တွေကို ...
ဟာ Off comments အယ်ဒီတာ့အာဘော်ထုတ်လုပ်မှုမန်နေဂျာအပေါ်
, အယ်ဒီတာများ, သုတေသနသို့မဟုတ်မိတ္တူထံမှလိုအပ် signoffs တောင်းခံနေဖြင့်နေ့စဉ် Plan ကိုပေါ်တက်အတိုင်းလိုက်နာနှင့်အတူ Assist အတည်ပြုချက်လုပ်ငန်းစဉ်မှတဆင့်အနုပညာစစ်ဆေးမှုများရွှေ့နဲ့အနုပညာနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့်ထုတ်လုပ်မှုကိုတက်ကိုင်ကြောင်းပြဿနာများ troubleshoot ကူညီတည်းဖြတ်, ဓာတ်ပုံ, သုတေသနနှင့်မိတ္တူဌာနများအားလုံးပုံပြင်များများအတွက် dossier Create တစ်ဦးချင်းစီကိစ္စကိုအတွက်အပြင်အဆင်နှင့်စာသားဖိုင်များကိုသင့်လျော်သောနာမအဘို့ Woodwing စစ်ဆေးစည်းဝေးကြီးများတစ်ဦးချင်းစီကိစ္စကိုအားလုံးကိုပုံပြင်များ၏ masterwork ဖန်တီးခြင်းနှင့်ကို update ကနေတဆင့်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်၏အသီးအသီးဇာတ်စင်မှတဆင့်ပုံပြင်များစစ်မည်။ အားလုံး Mockup အပြောင်းအလဲများကိုထည့်ပါ။ လိုအပ်ပါကအမိန့်ပြန်။ အပတ်စဉ်အားလုံးနေ့စဉ် masterworks နှင့် mockups ပို့စ်တင်နေဖြင့် Intranet ထုတ်လုပ်မှုဧရိယာထိန်းသိမ်းပါ ...
သင်တစ်ဦးစီမံခန့်ခွဲမှုအနေအထားသို့ရွှေ့ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီသူတစ်ဦးဖန်တီးမှု, Self-လှုံ့ဆော်, အတွေ့အကြုံရှိထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါသလား ဒီတော့လျှင်, ထိုဂရင်း-အမြင့် Point-Winston Salem ဈေးကွက်ထဲမှာ WXLV နှင့် WMYV သင်နှင့်အတူစကားပြောချင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ viewer ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဖမ်းပြီးလိမ့်မည်ဟုကျွန်တော်တို့ရဲ့ client များအတွက်ထိရောက်သောကြော်ငြာနှင့်အစီအစဉ်များဖန်တီးထုတ်လုပ်မယ့်အစာရှောင်ခြင်း-ပွေးညီ, နောက်ဆုံးနေ့မောင်းနှင်ပတ်ဝန်းကျင်၌အကြှနျုပျတို့၏ထုတ်လုပ်မှုဌာနရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်သူဖန်တီးမှုနှင့်ဆန်းသစ်သောစဉ်းစားတွေးခေါ်များအတွက် knack နှင့်အတူတစ်စုံတစ်ယောက်လိုအပ်ပါတယ်။ , directing ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ရေးသားခြင်းအတွက်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များ၏ငါးနှစ်အတွင်းပိုမိုနှစ်သက်သည်။
ဟာ Off comments Encoding အင်ဂျင်နီယာချုပ်အပေါ်
Encoding အင်ဂျင်နီယာများအတွက်တိုက်ရိုက်လွှ encoding ကအထုပ် set-up,, စစ်ဆင်ရေး၌ရှိသမျှသောဒြပ်စင်များအတွက်တာဝန်ရှိသည်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, အသီးသီးစဉ်အတွင်းနှင့်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုပြီးနောက်ရှေ့တော်၌, ဒဏ်ခတ်။ အဆိုပါ Encoding အင်ဂျင်နီယာမဆိုအထူးသဖြင့်ထုတ်လွှင့်များ၏လျော်သောတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ streaming များသေချာစေရန်တိုက်ရိုက်လွှထုတ်လုပ်သူများနှင့်ကင်မရာလုပ်ငန်းရှင်များနှင့်အတူတွဲဖက်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ encoding ကအင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးတည်းအလုပ်လုပ်ရန်သို့မဟုတ်ပိုကြီးတဲ့သင်္ဘောသားနှင့်အတူဖြစ်နိုင်သည်။ အဆိုပါစံပြကိုယ်စားလှယ်လောင်းတိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုအားစစ်ဆင်ရေးများနှင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ဘဏ်ဍာနှင့်အတူအတွေ့အကြုံရှိသည်လိမ့်မယ်, သူတို့ကနေ့နှင့်ညဉ့နှစ်ဦးစလုံးအချိန်ဇယားတလျှောက်ရှည်လျားနာရီအလုပ်လုပ်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ လျှောက်ထားအသေးစိတ် oriented ဖြစ်ခြင်းနှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အဖွဲ့အစည်းကျွမ်းကျင်မှုရှိသည်သငျ့သညျ။ တစ်ဦးက Self-လှုံ့ဆော် ...
ဟာ Off comments ထုတ်လုပ်မှုဒါရိုက်တာအပေါ်
ဖန်တီးလိုက်တဲ့; ဒီဇိုင်းများ; နှင့် In-အိမ်သူအိမ်သားအဓိကအားန်ထမ်းများ၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းများနှင့်အခွက်တဆယ်ပေါ် မူတည်. မူရင်းအကြောင်းအရာကိုဖွဲ့စည်းစီးပွားဖြစ်ဘဏ်ဍာ ပေး. စီရင်။ , In-အိမ်သူအိမ်သားမှတ်တမ်းတင်အပါအဝင်စီးပွားဖြစ်ထုတ်လုပ်မှုစီရင်လော့ပြောနေကြပါတယ်, ရောစပ်, dubbing နှင့်ကြော်ငြာ၏ Archives: ပါဝင်သည်ပေမယ့်ကန့်သတ်မရနောက်ဆုံး product.Required SkillsDuties မှအယူအဆအနေဖြင့်စီးပွားဖြစ်ကြာပါသည်။ ဝန်ထမ်းကိုထောကျပံ့ဖို့စီးပွားဖြစ်ထုတ်လုပ်မှု assign ။ လိုအပ်အဖြစ်ရေးသားခြင်းစီးပွားဖြစ်မိတ္တူအပါအဝင်စီးပွားဖြစ်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ပတ်သက်. အရောင်းဌာနမှကို Creative ထောက်ခံမှု။ track နဲ့မှန်ကန်သောနေ့စဉ်စီးပွားဖြစ်ကွာဟမှုအစီရင်ခံစာများ။ ဒီဂျစ်တယ်အသံပစ္စည်းကိရိယာများ၏စစ်ဆင်ရေး။ အစည်းအဝေးသတ်မှတ်ရက်မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်အဘယ်မှာရှိတစ်ဦးပတ်ဝန်းကျင်တွင်အသေးစိတ် oriented နှင့်အလုပ်ဖြစ်ရမည်။
မြှင့်တင်ရေးညှိနှိုင်းရေးမှူး / အင်ဂျင်နီယာချုပ်
ဟာ Off comments မြှင့်တင်ရေးညှိနှိုင်းရေးမှူး / အင်ဂျင်နီယာချုပ်အပေါ်
ဖြစ်သော CBS ရေဒီယို, CBS ကော်ပိုရေးရှင်း၏ဌာနခွဲ, ဘူတာကိုအခြားသူများအကြား, သတင်း, အားကစား, ဟောပြောပွဲ, ကျောက်, တိုင်းပြည်, ထိပ်တန်း 40, ဂန္ hits နှင့်မြို့ပြကို formats ဖုံးအုပ်နှင့်အတူ, United States မှာအကြီးဆုံးအဓိကစျေးကွက်ရေဒီယိုအော်ပရေတာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အပတ်စဉ်အခြေခံပေါ်မှာ Over-the-air နားထောင်နီးပါး 70 သန်းထူးခြားတဲ့ရောက်ရှိသည်ကွဲပြားခြင်းထိပ်တန်း 126 အပေါငျးတို့သအပါအဝင် 27 စျေးကွက်ဖြတ်ပြီး 10 ရေဒီယို station လုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုရေဒီယိုဘူတာရုံရဲ့ပရိုဂရမ်းမင်း၏ခြုံငုံရောနှောဘူတာရုံရဲ့တိကျတဲ့ format နဲ့ fit နှင့်၎င်း၏ဒေသဆိုင်ရာအသိုင်းအဝိုင်းအစေခံရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ Carson Daly, Boomer Esiason နှင့် Craig ပုံး, သူ Mike Francesa, ဒန်နီ Bonaduce, ကီဗင်နှင့် Bean နှင့်ရိုင်ယန်ကင်မရွန် ...
audio / ထုတ်လုပ်ခြင်းလက်ထောက်
ဟာ Off comments အသံ / ထုတ်လုပ်ခြင်းလက်ထောက်ပေါ်
ကျွန်တော်တစ်ဦးသေးငယ်တဲ့အသင်းများမှာကဲ့သို့အရည်အချင်းပြည့်မီသောကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ်ဦးအားကြီးသောအလုပ်ကျင့်ဝတ်များနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုများကိုဖြေရှင်းရေးဖန်တီးမှုပြဿနာနှင့်အတူတစ်အသေးစိတ် oriented အသင်းကစားသမားဖြစ်လိမ့်မည်။ ထို့အပြင်, ဒီသမ္မတလောင်းသစ်တစ်ခုအလုပ်လုပ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလျင်မြန်စွာလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်တတ်နိုင်တစ် Self-starter ဖြစ်လိမ့်မည်နှင့်သတ်မှတ်ရက်တွေ့ဆုံရန်မျိုးစုံတာဝန်များကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်စွမ်းနှင့်အတူဖိအားအောက်တွင်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဤသည်လျင်မြန်စွာတိုးဘို့အလားအလာနှင့်အတူလက်ျာကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ်ဦးမြေညီထပ်အခွင့်အလမ်းပါလိမ့်မယ်။ လိုအပ်တဲ့ကျွမ်းကျင်မှု: - စတူဒီယိုကိုမှတ်တမ်းတင်ရန် Experience- ထုတ်လုပ်မှု Experience- Superior တည်းဖြတ်ခြင်း / ပဲ့ချိတ်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အချက်ပြ Flow- ၏ Microphones- နားလညျမှု၏ Skills- ဒေါ် Experience- Console အ Experience- ကျွမ်းရောစပ် ...
Avid အသိပညာမိမိကိုယ်ကိုလှုံ့ဆော်သည်နှင့်တာဝန်များကိုကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့်ပုံမှန်သတိပေးချက်များမလိုဘဲသူတို့ကိုအပြီးသတ်နိုင်သူတစ်ဦး plusSomeone - hard ခိုင်မာတဲ့အလုပ်အတူလုပ်ကိုင်ပုံကိုကအနည်းဆုံးနောက်ဆုံးဖြတ်သုံးစွဲဖို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် communityKnows ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ် ethicExcited
ဟာ Off comments ထုတ်လုပ်မှုဒီဇိုင်နာအပေါ်။
USC ဘွဲ့လွန်စာတမ်း (ထိတ်လန့်ခြင်း / ဆိုင်းငံ့ခြင်း) သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောထုတ်လုပ်သူဒီဇိုင်းကိုရှာဖွေနေသည်။ သေနတ်ပစ်အချိန်ဇယား - ဒီဇင်ဘာ4- 11၊ LAPlease ရှိ 2013 သည်သင်အချိန်မီအလုပ်လုပ်နိုင်သောအလွန်တီထွင်ဖန်တီးမှုရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ဖြစ်လျှင်သက်ဆိုင်ပါသည်။ ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ကောင်းသောရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအမျိုးအစားကိုစိတ် ၀ င်စားသည်။ သို့သော်မလိုအပ်ပါ။ ဤသည်မှာလခနည်းသောအနေအထားဖြစ်သော်လည်းကမ္ဘာတဝှမ်းပွဲတော်များတွင်ဤရုပ်ရှင်ကိုပြသရန်စီစဉ်ထားသောကြောင့်သင့်အလုပ်ကိုရုပ်ရှင်အမျိုးအစားများစွာဖြင့်မြင်တွေ့ရရန်အလွန်ကောင်းသောအခွင့်အရေးဖြစ်သည်။ ချေးငွေနှင့်အစားအစာများလည်းထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။
အလွန့်အလွန်အလုပ်များတီဗီစားဖိုမှူး / စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ရဲ့အဖွဲ့၏အစိတ်အပိုင်း Be ဖို့ဟင်းချက်နိုင်ခြင်းနှင့်အတူထုတ်လုပ်မှုလက်ထောက်ဖို့မရှာ။ ချက်ပြုတ်ဖို့ချစ်သောသူတစ်ဦး overachiever ထုတ်လုပ်မှုလက်ထောက်ရှာဖွေနေ! အတှေ့အကွုံသဘောထားတီထွင်ဖန်တီးမှု, ဤတောင်းဆိုမှုများအနေအထားများအတွက်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကဲ့သို့အရေးကြီးသောမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ဦးလွန်စွာအရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍများတွင်အဓိကကွန်ယက်ကိုအနုပညာရှင်စားဖိုမှူးနှင့်၎င်းတို့၏တပြင်လုံးကိုအသင်းနှင့်အတူ side-by-side လုပ်ကိုင်ဖို့ရှားပါးအခွင့်အလမ်း။
ဟာ Off comments တွဲဘက်ထုတ်လုပ်မှုမန်နေဂျာအပေါ်
ကြော်ငြာနှင့်တည်းဖြတ်ရေးဌာနများနှင့်အစည်းအဝေးများမှတဆင့်လျှောက်လှမ်းပါ။ ကြော်ငြာနှင့်သတင်းအချက်အလက်များကိုထုတ်ဝေသူများစတူဒီယိုသို့တင်ပါ။ ထိရောက်သောနှင့်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်ပြissueနာကိုပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းအရောင်းနှင့်အယ်ဒီတာဌာနများအကြားဆက်ဆံရေး။ ကြော်ငြာပစ္စည်းများကုန်သွယ်ရေးတာ ၀ န်များ - ကြေငြာသူများစတူဒီယိုနှင့် Quad ARMManage ကြော်ငြာကို အသုံးပြု၍ ကြော်ငြာပစ္စည်းသတင်းများကိုညှိနှိုင်းပါ။ ပစ္စည်း extension များမြေပုံပေါ်တွင်ကြော်ငြာပုံများနှင့်သက်ဆိုင်သောကြော်ငြာရှင်သို့ဆက်သွယ်ပါ။ ကြော်ငြာကြေငြာခြင်းစွန့်စားမှုစာရွက်များ။ မဂ္ဂဇင်းပုံနှိပ်ထုတ်လုပ်မှုတွင် DBL မှတစ်ဆင့် In-Site2 + နှစ်များမှကြော်ငြာစာမျက်နှာများကိုအတည်ပြုခြင်း (သတင်းစာသို့မဟုတ်ကက်တလောက်ထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံသည်လက်ခံနိုင်ဖွယ်) မိမိကိုယ်ကိုလှုံ့ဆော်ခြင်း၊ နည်းစနစ်အသစ်များနှင့်စူးစမ်းလေ့လာရန်ဆန္ဒရှိသည်။ စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်မဂ္ဂဇင်းထုတ်လုပ်သည့်နည်းပညာဆိုင်ရာပြissuesနာများကိုနားလည်ခြင်းအသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊
မူရင်းကို Creative ထုတ်လုပ်မှုမန်နေဂျာ - ကို Creative
ဟာ Off comments Originals Creative ထုတ်လုပ်မှုမန်နေဂျာ - တီထွင်ဆန်းသစ်မှု
Netflix မှာကိုယ်ပိုင်မူရင်းအကြောင်းအရာဖန်တီးဖို့အလုပ်များနေတယ်။ House of Card မှ Arrested Development သို့အဝါရောင်အထိ New Black သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည်ဤခေါင်းစဉ်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုသို့ယူဆောင်လာရန်ညှိနှိုင်းရန်လိုအပ်သည်။ ဖန်တီးမှုနှင့်နည်းပညာအုပ်စုများအကြားတွင်အလုပ်လုပ်ခြင်းကိုနှစ်သက်သူတစ် ဦး ဦး ကိုကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာပစ္စည်းများအားလုံးကိုသေချာစွာမှီခိုအားထားနိုင်သူတစ်စုံတစ်ယောက်သည် Netflix မူရင်းတိုင်းအတွက်မှန်ကန်စွာသတ်မှတ်ပြီးကွပ်မျက်ခံရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း - Creative Services အဖွဲ့သည် Netflix ဝန်ဆောင်မှုအတွက်လိုအပ်သောဖန်တီးမှုဆိုင်ရာပစ္စည်းများအားလုံးကိုရယူရန်၊ အတည်ပြုရန်၊ ဒီဇိုင်းချရန်နှင့်ဖြန့်ကျက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အမျိုးမျိုးသောပါဝင်သည့်မိတ်ဖက်များနှင့်အတူတကွလုပ်ဆောင်ရန်တာဝန်ရှိသည်။ ငါတို့ ...
အယ်ဒီတာ / ဗွီဒီယိုထုတ်ကုန်မန်နေဂျာမန်နေးဂျင်း
ဟာ Off comments အယ်ဒီတာ / ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်မှုမန်နေဂျာကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း
ပုံနှိပ်ခြင်း၊ တည်းဖြတ်ခြင်း၊ ထုတ်လုပ်မှုသံသရာများကိုစီမံခြင်း၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်များကို update လုပ်ခြင်းနှင့်အွန်လိုင်းအကြောင်းအရာများကိုနေ့စဉ်တင်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ ဤရာထူးသည်ဗီဒီယို ၀ န်ဆောင်မှုဒါရိုက်တာအားလုပ်ငန်းအသွားအလာနှင့်အချိန်ဇယားဆွဲခြင်း၊ ဗီဒီယိုဖန်တီးမှုဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု၊ စာရွက်စာတမ်းများ၊ ဘတ်ဂျက်ရေးဆွဲခြင်း၊ စံပြကိုယ်စားလှယ်လောင်းသည်အပြုသဘောဆောင်သောသဘောထားရှိပြီးအလုပ်များစွာကိုလုပ်နိုင်သည်၊ HD ဗီဒီယိုအတွေ့အကြုံအပြင် linear non editing နှင့် / or motion graphics တို့အတွက်ကောင်းကျိုးများရှိသည်။ ခိုင်မာသောပါဝင်မှုကိုတည်းဖြတ်ခြင်းစွမ်းရည်နှင့်အနည်းဆုံး3နှစ်၏တည်းဖြတ်မှုအတွေ့အကြုံသည်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။
ထုတ်လုပ်မှုလက်ထောက်, Esquire ကွန်ယက်
ဟာ Off comments Production Assistant, Esquire ကွန်ယက်အကြောင်း။
အမှတ်တံဆိပ်ကိုနားလည်ခြင်းနှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာအသုံးအနှုန်းများအားလုံးတွင်ကွန်ယက်၏အသံကိုအသက်ဝင်လာစေရန်ကူညီခြင်း။ ရေဒီယိုနှင့်ကွန်ယက်ရောင်းအားတင်ဆက်မှုများစသည်တို့ကိုစီမံကိန်းများပေါ်တွင်လုပ်ဆောင်ပါ။ လေကြောင်းအထူးအစီအစဉ်များ၊ ကြားဖြတ်အဖွဲ့များ၊ ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းများ၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးစီမံကိန်းများ၊ ကမကထပြုသောဗင်နက်များ၊ အွန်လိုင်း၊ OOH၊ တာ ၀ န်အမျိုးမျိုးကိုကူညီခြင်း - အကောင်းဆုံးရိုက်ချက်များနှင့်ကိုက်ခြင်းအတွက်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ ရိုက်ကူးခြင်းနှင့်ရုပ်ပုံများအတွက်သိုလှောင်ထားသောအိမ်များကိုရှာဖွေခြင်း၊ ဓာတ်ပုံများကိုလိုင်စင်ချခြင်း၊ ဝယ်ယူခြင်းနှင့်ခြေရာကောက်ခြင်း၊ ဌာနဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများနှင့်ဖိုင်များကိုစီစဉ်ခြင်းစသည်တို့ကိုစာရွက်စာတမ်းများဖြင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖြင့်စီစဉ်ခြင်း။ ထုတ်ဝေသူများ၊ အယ်ဒီတာများနှင့်အလုပ်လုပ်သည်။
နယူးယောက်မဂ္ဂဇင်းသည်အပတ်စဉ်မဂ္ဂဇင်း၏ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်တက်ဘလက်ဗားရှင်းနှစ်ခုလုံးအတွက်ကြော်ငြာထုတ်လုပ်မှုကိုကိုင်တွယ်ရန်ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးမှူးကိုရှာဖွေသည်။ တာဝန်ဝတ္တရားများတွင်မဂ္ဂဇင်း၏ကြော်ငြာပေါ်တယ်သို့တင်ထားသောပုံနှိပ်ထားသောကြော်ငြာဖိုင်အားလုံးကိုလူကုန်ကူးခြင်း၊ ဖိုင်သတ်မှတ်ချက်များမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုခြင်း၊ ထောက်ပံ့ပစ္စည်းသည်အမှာစာညွှန်ကြားချက်နှင့်ကိုက်ညီမှုရှိ၊ လိုအပ်သောတိုးမြှင့်မှုများအပါအ ၀ င်ထုံးစံအတိုင်း iPad ထုတ်ဝေမှုအတွက်ပစ္စည်းများကိုပြုပြင်ခြင်း။ သော့ခတ်ထားသည့်နေရာသည်ပြmapနာမြေပုံရေးဆွဲခြင်းနှင့်သောကြာနေ့ညများတွင်အပတ်စဉ်ပိတ်ခြင်းကိုကူညီခြင်းဖြစ်သည်။ - ထူးကဲကောင်းမွန်သောစည်းရုံးရေးစွမ်းရည်၊ အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အသေးစိတ်အာရုံစူးစိုက်မှု - ထူးကဲကောင်းမွန်သောလူ့အစွမ်းနှင့်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း ...
ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု EVP လက်ထောက်။
ဟာ Off comments ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ EVP မှလက်ထောက်အပေါ်။
လက်ထောက်တစ် ဦး ကိုရှာဖွေနေသည့် Das Films ၏ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး EVP ။ NOVEMBER MAN လို့ခေါ်တဲ့ Pierce Brosnan နဲ့အတူကြီးမားတဲ့သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာထုတ်လုပ်မှုနောက်မှာရှိနေပါပြီ။ လာမယ့်နှစ်မှာ 2-3 ရုပ်ရှင်တွေကိုထုတ်လုပ်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် 20 ရုပ်ရှင်များကိုတီထွင်ထုတ်လုပ်မှုနှုန်းထားများရှိပြီးရုပ်မြင်သံကြားစက်ထဲသို့စတင်ဝင်ရောက်လာသည်။ အကောင်းဆုံးသောကိုယ်စားလှယ်လောင်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောဆက်သွယ်ရေးစွမ်းရည်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသင့်သည်။ ဟာသ, လူပေါင်းကောင်းသောနှင့်အပြုသဘောဆောင်တဲ့စွမ်းအင်ကိုတစ် ဦး မဖြစ်မနေ။ ထုတ်လုပ်မှု၏ကဏ္ aspects အားလုံးတွင်ပါ ၀ င်ရန်နှင့်ပါ ၀ င်ရန်အစပျိုးမှုနှင့်စိတ်အားထက်သန်မှု။ ဖွံ့ဖြိုးမှု၊ ထုတ်လုပ်မှု၊ စတူဒီယိုနှင့်လွတ်လပ်သောဘဏ္financeာရေး၊ အတွေ့အကြုံရှိသူ၊ စာရေးသူ၊ ဒါရိုက်တာ / စွမ်းရည်ရှိသူ။
ဟာ Off comments ထုတ်လုပ်မှုအလုပ်အမှုဆောင်၏ရုံးခန်းထဲမှာ Intern အပေါ်။
ပြည်သူ့ပြဇာတ်ရုံ / နယူးယောက်ရှိတ်စပီးယားပွဲတော်သည်ထုတ်လုပ်မှုအလုပ်အမှုဆောင်ရုံး၌အလုပ်သင်အဖြစ် ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်အလွန်စနစ်တကျအသေးစိတ်ထားသည့်အပြုသဘောဆောင်သည့်အသင်းကစားသမားကိုရှာဖွေနေသည်။ ၎င်းသည်ထုတ်လုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု၊ အထွေထွေစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အဆောက်အအုံများကိုထိတွေ့ခြင်းကိုစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောအခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အလုပ်သင်သည်ထုတ်လုပ်မှု၊ အထွေထွေစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်မြို့တွင်းနေရာများနှင့်အဆောက်အအုံများနှင့် Central Park ရှိ Delacorte ပြဇာတ်ရုံများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာအမှုဆောင်နှင့်တွဲဖက်ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာအမှုဆောင်အရာရှိအားအထောက်အပံ့ပေးပါလိမ့်မည်။ လုပ်ငန်းတာဝန်များတွင်ဖုန်းများဖြေကြားခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ရေးအလုပ်အမှုဆောင်၏အချိန်ဇယားကိုညှိနှိုင်းခြင်းနှင့်အစည်းအဝေးများစီစဉ်ခြင်းနှင့်အခြားအလုပ်များ၊ စီမံကိန်းများနှင့်လိုအပ်ချက်များအရပါဝင်သည်။ လျှောက်ထားသူသည်မိမိကိုယ်ကိုလှုံ့ဆော်မှုရှိရမည်၊
973 ၏စာမျက်နှာ 981«ပထမဦးစွာ...950960970«971972973974975»980...နောက်ဆုံး»